Sina 10 soka Alika / Hyamine Wipe gazy sy mpanamboatra | Zhongrong
Mampiasa ny tanana Sanitizer TECH-BIO ny ankizy
50ml Fanadiovan-tànana TECH-BIO
OEM mpanadio tanana
75% famonoana alikaola alika TECH-BIO
50ml 75% famonoana alikaola TECH-BIO
500ml 75% famonoana alikaola TECH-BIO
2.5L 75% famonoana alikaola TECH-BIO
75% famonoana alikaola amin'ny IBC / Drum
Famonoana otrikaina hamafana TECH-BIO
1 sotro Alkoholika / Hyamine
10 sotro Alkoholika / Hyamine
50 sotro Alkoholika / Hyamine
150 sotro Alkoholika / Hyamine
Ny fahombiazan'ny bakteria an'ity vokatra ity dia voasedra araka ny fenitra nasionaly avy amin'ny maso ivoho fitiliana mari-pahaizana mifanaraka amin'izany. Ny tahan'ny sterilization mahomby amin'ity vokatra ity manohitra ny Escherichia coli, Staphylococcus aureus ary Candida albicans dia mety hahatratra 99,99% eo ambanin'ny fisedrana mandritra ny iray minitra. Ny valiny dia ho fanovozan-kevitra.
10 Piece Pack amin'ny 75% Alcohol Wipe
Torolàlana momba ny kitapo fonosana voatondro ：
Halavany * sakany * hahavony 160 * 95 * 15 mm
Ny sary famantarana ny TECH-BIO 、 Sinoa & Anglisy anarana
Singa ambadika ：
Afaka manadio ny hoditra moramora amin'ny endriny malefaka izy io. Izy io dia mety amin'ny namaoka tanana, hoditra sns, miaro ny fahasalaman'ny fianakaviana amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana samihafa.
Anaran'ny vokatra： 75% Fafafa amin'ny toaka
Fangaro fototra： Alikaola 75% （V / V） 、 Rano voadio 、 Spunlace tsy misy tenona
Mampiasà faritra： Izy io dia mety amin'ny namaoka tanana, tarehy, hoditra tsy miova ary ambonin'ny zavatra amin'ny ankapobeny. Aza ampiasaina amin'ny maso, ratra ary faritra hafa mora tohina.
Fampiasana: Esory ny sticker. Ampiasao aorian'ny fitrandrahana azy ary asio tombo-kase ara-potoana. Ny fotoana fiasa ho an'ny tanana dia ≤1min, ny fotoana fiasan'ny hoditra tsy miovaova dia ≤5min, ary ny fotoana fiasan'ny zavatra tsotra dia ≤30min.
fampitandremana： Mitahiry amin'ny toerana mangatsiaka sy maina. Ho an'ny fampiasana ivelany, sorohy ny vava ary mifandraisa amin'ny maso. Mora mirehitra, fadio ny mari-pana avo na ny loharanon'ny afo. Ny olona tsy mahazaka alikaola dia mitandrina tsara. Ataovy tsy ho azon'ny zazakely sy ny ankizy kely izany. Azafady apetraho ao anaty fitoeram-pako aorian'ny fampiasana azy. Aza miditra ao amin'ny trano fidiovana hisorohana ny fanakanana. Ny zaza latsaky ny 3 taona dia tsy tokony ampiasaina.
Fitsipi-pahasalamana： GB 15979
Fenitra Executive:GB / T 27728-2011
Famaritana vokatra:200mm X 150mm
Atiny Net: 10pcs
Vanim-potoana validity: Roa taona
Isa isa: Jereo fonosana
Daty fampiasana voafetra: Jereo fonosana
alalana avy amin'i Zhongrong Technology Co.rporation Ltd.
ampiana hoe: No. 1, Changqian Road, Distrikan'i Fengrun, Tanànan'i Tangshan, Faritanin'i Hebei
ampiana hoe:Ditian Functional Zone, Xiaoshun Town, Distrikan'i Jindong, Tanànan'i Jinhua, Faritanin'i Zhejiang
Fahazoan-dàlana ho an'ny fahadiovana NO: (Zhejiang) Fanamarinana fanadiovana (2018) No. 0071
Fonosana sy fitaterana
Fanamarinana momba ny orinasa
Previous: 50 sotro Alkoholika / Hyamine
Manaraka: 150 sotro Alkoholika / Hyamine
Adiresy: Room1602 Vanke Center, No.970 Nanning Rd., Xuhui District, Shanghai 200235 Office SH Office）
Telefaona: +86 21 6470 0198